सधैँ दशैँको मुखमा ग्यास अभावको त्रास किन ? – www.agnijwala.com
सधैँ दशैँको मुखमा ग्यास अभावको त्रास किन ?
काठमाडौँ, ७ असोज । उद्योगीले आफ्नो माग पूरा गर्न दबाब दिने उदेश्यले बर्सेनी दशैंअघि ग्यास अभावको सिर्जना गर्ने गरेका छन् ।यसपटक पनि साताअघि पत्रकार सम्मेलन गरी ग्यास उद्योग संघले ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेटको भाडादर नबढाए आपूर्तिमा समस्या हुने बताएका छन् ।
निगमले प्रतिसिलिन्डर उद्योगीलाई २८१।०५ रुपैयाँ दिँदै आएको छ । उद्योगीलाई एकमुष्ट यो रकम दिएर प्रतिसिलिन्डर १४ सयमा बेच्दा निगमलाई ३०९।७९ रुपैयाँ नोक्सान छ ।
उद्योगीले सात आठ बर्षदेखि हरेक दशैंअघि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आजको नयाँपत्रिकामा खबर छ ।